कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज वैशाख २६ गते बिहिबारको राशिफल ! - PUBLICAAWAJ
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज वैशाख २६ गते बिहिबारको राशिफल !
प्रकाशित : बुधबार, बैशाख २५, २०७६१७:०८ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
वि.सं. २०७६ साल वैशाख २६ गते। बिहीबार। इश्वी सन् २०१९ मे ९ तारिख। शकसंवत् १९४१। परिधावी संवत्सर। उत्तरायण। वसन्त ऋतु। नेपाल संवत् ११३९ बछलाथ्व। वैशाख शुक्लपक्ष। तिथि– पञ्चमी, २३:३५ बजेउप्रान्त षष्ठी। नक्षत्र– आर्द्रा, १५:४५ बजेउप्रान्त पुनर्वशु। योग– धृति, १९:३८ बजेउप्रान्त शूल। करण– वव, १२:३१ बजेदेखि वालव, २३:३५ बजेउप्रान्त कौलव। आनन्दादिमा काण योग। चन्द्रराशि– मिथुन। काठमाडौंमा सूर्योदय– ५:२१ बजे, सूर्यास्त– १८:४१ बजे र दिनमान ३३ घडी २० पला। श्री आद्यशंकराचार्य जयन्ती। श्रीरामानुजाचार्य जयन्ती। कानुन दिवस।
आज विचारको जतिशिलताबाट द्विविधाको अनुभव गर्नु हुनेछ । जस कारण कुनै ठोस निर्णयमा आउन सक्नु हुने छैन । नोकरी धन्दाको क्षेत्रमा आजको दिन प्रतिस्पर्धा युक्त रहनेछ । नयाँ कार्य शुरु गर्ने प्रेरणा मिल्नेछ । नयाँ कार्य आरम्भ गर्न सक्नु हुनेछ । लेखन कार्यको लागी राम्रो दिन छ । आज बौद्धिक तथा तार्किक विचार विनिमय को अवकाश मिल्नेछ ।
तपाइँको दुविधापूर्ण व्यवहारले तपाइँलाई समस्या पुर्याउन सक्दछ । जस कारम महत्वपूर्ण समय खेर जानेछ । जिद्दी स्वभावलाई त्याग्नु उचित हुनेछ । विवादमा परिने सम्भावना छ । सम्भवत प्रवासलाई स्थगित गरिदिनु होला । लेखक, कारीगर र कलाकारलाई आफ्नो प्रतिभा देखाउने अवसर मिल्नेछ । सुमधुरवाणीले हर कोहिलाई रिझाउन सकिनेछ ।
तन मन देखि ताजापनको अनुभवको साथ दिनको शुरुवात हुनेछ । घर या कहिँ बाहिर मित्र तथा परिवारको साथ मनपर्ने खाना खाने अवसर मिल्नेछ । आर्थिक लाभको योग छ । मनमा कुनै पनि प्रकारको नकारात्मक भावना आउन नदिनु होला ।
अधिक खर्चको दिन छ । परिवारको वातावरण खासै राम्रो रहने छैन । कुटुम्बीजनको साथ मतभेदको सम्भावना छ । मनमा अनेक प्रकारको अनिश्चितताको कारण मानसिक अस्थिरता रहनेछ । मन द्विधायुक्त रहनेछ । वाणीमा संयम राख्नु होला । कसैको साथ वादविवाद या झैँ-झगडाले मामला खराब बनाउन सक्दछ ।
आज कुनै पनि कुरामा दृढ मनबाट निर्णय लिन सक्नु हुने छैन । जस कारण पाइएको मौकाको सहि लाभ उठाउन सक्नु हुने छैन । आफ्नै विचारको उल्झनमा पर्नु हुनेछ । स्त्री मित्रको तर्फबाट लाभ हुनेछ । व्यापारमा लाभ हुनेछ । महत्वपूर्ण निर्णय आज नलिनी नै उचित हुनेछ । सन्तानको साथ भेट हुनेछ । स्वादिष्ट भोजनको अवसर मिल्नेछ ।
वर्तमान समयमा नयाँ कार्यसंग सम्बन्धित सफल आयोजना गर्न सक्नु हुनेछ । व्यापारी वर्ग र नोकरी वर्गको लागि आजको दिन निकै लाभदायक रहनेछ । शिर्ष अधिकारीको कृपा दृष्टिले पदोन्नतिको योग छ । गृहस्थ जीवनमा आनन्दको माहोल रहनेछ । कुटुम्बमा प्रेम रहनेछ । पिताको तर्फबाट लाभ हुनेछ ।
व्यवसायमा समस्या आउनेछ । सन्तान प्रतिको चिन्ताले सताउनेछ । टाढाको प्रवासको आयोजना हुनेछ । धार्मिक यात्राको पनि योग छ । लेखन, साहित्य सर्जन गर्न सक्नु हुनेछ । प्रतिस्पर्धीको साथ वादविवाद नगर्नु होला ।
वर्तमान समय शांतिपूर्वक बित्नेछ । क्रोधलाई काबुमा राख्नु होला । अनैतिक कार्यबाट टाढा रहनु होला । नयाँ सम्बन्ध बनाउनु अघि सोच्नु होला । अधिक धन खर्च हुँदा आर्थिक समस्याको अनुभव गर्न सक्नु हुनेछ । समयमा काम पुरा हुने छैन । खान-पिनमा ध्यान राख्नु होला । शारीरिक र मानसिक अस्वस्थताको अनुभव गर्नु हुनेछ । योग ध्यान र आध्यात्मिकताबाट मनलाई शान्ती मिल्नेछ ।
आज बौद्धिक तार्किक विचार विनिमयको लागी राम्रो दिन छ । समाजमा मान-सम्मान मिल्नेछ । मित्रको साथ भेट हुनेछ । स्वादिष्ट भोजन र सुन्दर परिधानले मन खुसि हुनेछ । शारीरिक स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ । भागिदारी लाभदायक बन्नेछन् ।
व्यापारमा खुब सफलता मिल्नेछ । कानुनमा फसिएला यसको विशेष ध्यान राख्नु होला । व्यापारको लागी लिइएको भावी योजना सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछ । पैशाको लेनदेन सफलतापूर्वक रहनेछ । देश विदेशमा व्यवसाय गर्नेहरुको लागी फायदा हुनेछ । घरमा परिवारजनको साथ आनंदपूर्वक समय बित्नेछ । धन लाभको योग छ । कार्यमा यश मिल्नेछ ।
बौद्धिक शक्तिको कारण लेखनकार्य र सृजनकार्य राम्रो रहनेछ । तपाइँको विचार कुनै एक कुरामा स्थिर रहने छैन । विचारमा लागातार परिवर्तन आइरहनेछ । स्त्री वर्गले आफ्नो वाणीमा संयम राख्नु होला । यात्रा प्रवासको सम्भावना छ । बच्चाको प्रश्नले चिन्तित गराउनेछ । आज कुनै पनि नयाँ कार्यको शुरुवात नगर्नु होला ।
घर, वहानको दस्तावेज गर्दा निकै सम्हालिएर गर्नु होला । परिवारको माहोल बिग्रन सक्दछ । वादविवादलाई स्थगित गर्नु होला । आमाको स्वास्थ्य बिग्रनेछ । स्फूर्तिको अभाव रहनेछ । प्रवासलाई स्थगित गर्नु होला । पानीबाट बच्नु होला । अधिक भावुकताले हानी पुर्याउनेछ ।
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज असोज २१ गतेको राशिफल